Kuchenesa Tool ndechimwe chezvinhu zvinobatsira zvakavakirwa mukati Windows uchishandisa system. Iyo yemahara skrini yekutora chishandiso kubva kuMicrosoft inogona kutora izere-skrini, hwindo, rectangular, kunonoka, kana yemahara-fomu snaps. Chikamu chakanakisa ndechekuti varipo mapfumbamwe anobatsira mapfupi ekhibhodi ye Snipping Turu kubata chidzitiro nekukurumidza.
Nepo Kubvarura Turu kuri nani pane iyo skrini yekutora mashandiro atakaona pakutanga Windows shanduro, ichiri kushaya mamwe akakosha maficha senge mufananidzo saizi uye kubvarura. Iyo yazvino vhezheni yeSnipping Tool inokutendera iwe chete kuratidza chikamu cheiyo snap uye kunyora chero chinhu uchishandisa peni pane iyo snap.
Mazhinji evatatu-bato mahara emahara-ekutora ekushandisa maturusi anopa zvakawanda kupfuura iyo yakavakirwa-muKubvarura Turu. Zvishandiso zvemahara zvakaita seGreenshot (izvo zvandave ndichishandisa kwemakore izvozvi) hazvingokugonesa iwe kutora chinyorwa asi zvakare zvinokutendera iwe kumisikidza mhando, fomati fomati, uye nyore kutsanangura mifananidzo.
Kana iwe uri kushandisa yechitatu-bato screen kutora chinoshandiswa mu Windows 10, iwe ungangoda kuremadza iyo yakavakirwa-mukati Kubvarura Turu. Neraki, pane gadziriro mu Windows 10 kuremadza iyo Sniping Chishandiso pasina kubata mafaera ayo ehurongwa.
Iwe unogona kushandisa iyo Boka Policy kana Registry Edhita kudzima iyo Yekubvambura Chishandiso mu Windows 10.
Unowana "Windows haikwanise kuvhura chirongwa ichi nekuti chakadzivirirwa nesoftware inorambidza mutemo ”meseji paunenge uchiedza kuvhura iyo Yekutsemura Chishandiso paPC pakabvarura Chishandiso chakaremara.
Pedzisa zvakapihwa pazasi madhairekitori kuti ugone kana kudzima iyo Yekutora Chishandiso mu Windows 10.
Gonesa kana kudzima iyo Yekutora Chishandiso kuburikidza neBoka Policy
Iyi nzira inoitirwa chete maProfessional uye Enterprise editions vashandisi ve Windows 10. Kana iwe uripo Windows 10 Yekutanga edition, ndokumbira utarise kunongedzo muMethod 2 yechinyorwa chino.
Step 1: Vhura Yemunharaunda Boka Policy Mupepeti nekutaipa Gpedit.msc muKutanga kana taskbar yekutsvaga bhokisi uye nekudzvanya Enter.
Step 2: Mune iyo Local Group Policy hwindo, enda kune inotevera folda.
User Configuration > Administrative Templates > Windows zvinoriumba > Tablet PC > zvishongedzo
Step 3: Zvino, kurudyi-kurudyi, double-click on Usabvumire Snipping Turu kumhanya chinangwa chekuzarura zvinhu zvayo.
Step 4: sarudza akwanise uye ipapo chengetedza Shandisa bhatani rekudzimisa iyo Yekushandisa Yekushandisa mukati Windows 10.
Kugonesa iyo Yekutora Chishandiso zvakare, sarudza Kwete Kugadziriswa wobva wadzvanya Nyorera bhatani.
Gonesa kana kudzima iyo Yekubvambura Turu kuburikidza neRegistry
Step 1: Vhura Registry Mhariri nekutaipa Regedit.exe muKutanga kana taskbar yekutsvaga munda uye nekudzvanya Enter Enter. Dzvanya Ehe bhatani kana uye kana iwe ukaona iyo Yekushandisa Akaunti Kudzora dialog.
Kana iyo TabletPC kiyi isipo, tinya-kurudyi pane Microsoft kiyi, tinya Nyowani wobva wadzvanya Kiyi. Ipa zita rekuti TabletPC.
Step 3: Mune yekuruboshwe-pane, sarudza HwendefaPC. Kurudyi-kurudyi, kurudyi pane nzvimbo isina chinhu, tora New, uye ipapo tora DWORD (32-bit) Kukosha uye zita rake se DisableSnippingTool.
Step 4: Pakupedzisira, kaviri-dika pa DisableSnippingTool uye chinja kukosha kwayo data ku 1 kudzima iyo Yekutora Chishandiso mu Windows 10. Kugonesa iyo Yekutora Chishandiso, set DisableSnippingTool ukoshesa data ku 0 (zero).
Ndinovimba iwe unowana ichi chinyorwa chinobatsira!
Maitiro Ekugonesa Kana Kuremadza Zvirongwa Mu Windows 10
Maitiro Ekuvhura Kana Kubvisa Iyo Nyowani Kutanga Menyu mukati Windows 10 Version 2004
Filed Under: knipprogramma windows 10 uitschakalen